အယ်ဖိုး: Sentafile upto 2GB (FREE)
Ba U Gyi
+For us surrender is out of question+ (လက်နက်ချအညံ့ခံခြင်း အလျှင်းမပြောရ) +We shall retain our arm+ (ကရင့်လက်နက် ကရင်တွေကိုင်ထားရမယ်) +The recognition of Karen State must be complete+ (ကရင်ပြည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံရမည်) +We shall decide our own political destiny+ (ကရင့်ကျမ္မာ ကရင်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်)။
General Saw Bo Mya
Mahn Ba Zan
To Reach Our Goal
MMA : Myanmar Mp3 - Myanmar Song - Myanmar Music
Welcome to ShweO Myanmar Movie Vcd Music
Short Film about (IT)
Refugee Life & Hope
Karens and Karen State
Karens and karen state It would not be difficult to understand the real nature of the Karen and Burman. They are in fact different and distinct genuses and it isadream that Karen and Burman can ever evolveacommon nationality, and this misconception of one homogeneous Burmese Nation has gone far beyond the limits and is the cause of most of the troubles and will lead Burma to destruction if we fail to revise our notions in time. Originally, Karen and Burman belong to two different racial origins (Mongolian, and Tibeto-Burma), religions, philosophies (Animism and Buddhism), social customs and literature. They belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspect on life and of life are different.
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ပြာသိုလဆန်း(1)၇က်နေ. ကရင်တော်လှန်ရေးနေ. ဇန်န၀ါ၇ီလ(31)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ.့ဖေဖော်ဝါ၇ီလ(5)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားနေ.့ဖေဖော်ဝါ၇ီလ(11)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနေ. ဧပြီလ(5)၇က်နေ. ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနေ. မေလ(23)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နေ. ဂျုလိုင်(5)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေး တပ်မတော်နေ. ဂျုလိုင်(16)၇က်နေ. ကရင့်အာဇာနည်နေ. သြဂုတ်လ(12)၇က်နေ. ကရင်ချည်ဖြူဖွဲ. (လက်ချည်ပွဲ)နေ. ၀ါခေါင်လပြည့်နေ
Sentafile upto 2GB (FREE)
တခုတလော File sent ရတာတွေအဆင်မပြေဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ ခေတ်မီလာတာနဲ့
အမျှရှိသမျှ File size တွေက အရည်အသွေးကောင်းလာသလို Size လဲကြီးလာတာပေါ့ 100 MB လောက်
မရတော့ဘူး အနည်းဆုံး 500 MB ကနေ 1GB လောက်မှ အဆင်ပြေကျတော့တယ်။ ဒီလိုကျတော့ Free
တင်ရဖို့ ဒေါင်းရဖို့မလွယ်တာ့ဘူး ဒေါ်လှ(ဒေါ်လာ) ကိုတောင်းလာတက်ကြတယ်။ အခုကျွန်တော် ပြောပြမဲ့
Site လေးက Register တောင်လုပ်ဖို့မလိုဘဲ Upload လဲ2GB အထိ Free၊ Download လဲ2GB အထိ
Free ဆိုတော့ အဆင်ပြေပြေပျော်ပျော်ကြီး အသုံးပြုလို့ရပြီးပေါ့
Upload & Download upto2GB (FREE) on http://fileape.com/
Posted by Peace at 2:18 PM
Revolution is our School and Our University.အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ခံစားချက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နည်းပညာ(IT)မြစ်တစ်စင်းကတော့ ကျွန်တော့နှလုံးသားအတွက်အဓိကရေသောက်မြစ် တစ်စင်းပါပဲ
စတင်လုပ်ရမှာကတော့.... 1. Start Menu--->> Click Run ကိုရွေးပါ။ 2. Type gpedit.ms c ရိုက်ပါ။ 3. Enter ခေါက်ပါ။ 4. ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Computer ...
Window တင်ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ applications တွေ စုထားပေးပါတယ်...2010.Window Post Installation Latest Software Collections
Office 1. Microsoft office 2007 ultimate 2. Microsfot office 2...
IT Blog List
Myanmar Blogger Stuffs
ကော့သောင်းသား Blogger @ IT Crazy
العاب حرب القبائل
Knowledge to Decide on Myanmar ICT
ကရင် အမျိုးသား မိတ်သဟာယ အဖွဲ.
ကရင်သက္ကရာဇ် ၂၇၅၂ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို. ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်
Diary of IT Men
Computer » 2009 » June
ကွန်ပျူတာ Programming -
Myanmar Society / Published News
nightmarestar's ideas Blog
Myanmar Chat Online
Wai Yan Lin
Myanmar IT Developement
Revolution is our School and Our University
အယ်ဖိုး © 2008 Template by: